Igwe Ọdụdọ Nhọrọ-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ihe ndị na-adịgide adịgide bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ oge a. A hụrụ ha ma ọ bụ jiri ha mepụta ihe ọ bụla dị mma nke oge a. A na-emepụta nkume ndị mbụ na-adịgide adịgide site na nkume ndị na-emekarị na-akpọ lodestones. Nkume ndi China bu ndi mbu mutara o kariri 2500 gara aga ma ndi Gris mechara nweta ya site na mpaghara Magnetes, nke ihe sitere na ya nweta aha ya. Kemgbe ahụ, a na-emeziwanye ihe ndị magnetik nke ọma na todays na-adịgide adịgide ihe ndị magnet bụ ọtụtụ narị ugboro ike karịa magnets nke oge ochie. Okwu magnet na-adịgide adịgide sitere na ikike nke ndọta iji jide ụgwọ ndọta na-adọrọ adọrọ mgbe ewepụsịrị ya na ngwaọrụ ndọta. Ngwa ndị a nwere ike ịbụ ndị ndọta na-adịgide adịgide magnetized, ndọta igwe ma ọ bụ igwe waya na-eji ọkụ eletrik ebu obere oge. Ikike ha nwere ijide ụgwọ magnet na-eme ka ha baa uru maka ijide ihe na ebe, ịtụgharị ọkụ eletrik na ike ebumnuche yana nke ọzọ (moto na igwe na-enye ọkụ), ma ọ bụ na-emetụta ihe ndị ọzọ ewetara ha.